Golaha ammaanka oo walaac ka muujiyay dilkii loo gaystay qof ka tirsanaa shaqaalaha gargaarka. – Radio Daljir
Agoosto 29, 2012 8:19 b 0
Nayroobi ?Aug, 29 – Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa cambaareyneysa dil shalley qofu shaqeeya Ururka Cuntada iyo Beeraha ee FAO loogu geystey magaalada Markaee koonfurta Soomaaliya.
Tan iyo bishii Agoosto 2011, 20shaqaalaha hawlaha bani?aadamnimada ah ayaa lagu diley Soomaaliya iyagaoo ku dadaalaya in ay gargaar iyo taageero gaarsiiyaan malaayiin qof oodhibaateysan. Tirada dadka Soomaalida ah ee gargaar nafaha lagu badbaadiyohelaya ayaa noqdey in ka badan laba-laab tan iyo markii macaluusha lagudhawaaqey bishii Juunyo 2011kii iyada oo Qaramada Midoobey iyo la-hawlgalayaashabani?aadamnimadu ay kor u qaadeen hawlgallada ay ku gaarayaan bulshooyinkanugul. Maanta, in ka badan 1.6 milyan qof oo Soomaali ah ayaa helaya gargaarcunto, halka 1.7 milyan qofna ay helayaan biyo nadiif ah. Weerarro laguqaado shaqaalaha gargaarka waxaa ay wax u dhimayaan awoodda ay QaramadaMidoobey u leedahay joogteynta hawlgallo bani?aadamnimo oo waaweyn waxaanauu saameyn ku yeelanayaan nolosha Soomaali nugul.
Qaramada Midoobey waxaa ay dhammaan dhinacyadaku lugta leh Soomaaliya xusuusineysaa dhexdhexaadnimada iyo muhiimaddaay leedahay hawsha bani?aadamnimada waxaana ay dhammaan dhinacyada ugubaaqeysaa in shaqaalaha gargaarka u oggolaadaan in ay si ammaan ah uguadeegaan dhibbanayaasha colaadda socota, Qaramada Midoobey waxaa ay dalbaneysaain dhammaan dhinacyadu ay yareeyaan saameynta ay colaaddu leedahay dadkarayidka ah.
Macluumaaddheeri ah, fadlan kala soo xiriir:
Palmira Ciacciarelli,+254 721475368, [email protected]
Roberta Russo,+254733643737, [email protected]
ama faallo Af-Soomaaliah kala soo xiriir
Abdi Yussuf Noor +254 734 210 103,[email protected]